Ihowuliseyili manufacturers ibhegi lokucoca kunye nabathengisi | Isihluzi seRiqi
Sizimisele ekuboneleleni ngesahlulo ngasinye okanye inkonzo onokuyifuna ngexesha lokuphila okupheleleyo kwezixhobo zakho zolawulo longcoliseko lomoya. 1. Imveliso Intshayelelo yebhegi yokuhluza yinkxaso yeengxowa zokucoca ulwelo kwaye kufanele ukuba zikhanyise kwaye kube lula ukufakelwa kunye nokugcinwa. Umgangatho wekheji yokuhluza inegalelo ngokuthe ngqo kwimeko yokuhluza kunye nakwinkonzo yobomi beebhegi zokucoca.Sisebenzisa izixhobo zemveliso eziphambili kunye nokuvavanywa kuthetha ngokweendlela ezahlukeneyo zomsebenzi webhegi yokuhluza ...
Sizimisele ekuboneleleni ngesahlulo ngasinye okanye inkonzo onokuyifuna ngexesha lokuphila okupheleleyo kwezixhobo zakho zolawulo longcoliseko lomoya.
1. Intshayelelo yeMveliso
Isingxobo sebhegi yokuhluza yinkxaso yeengxowa zokucoca ulwelo kwaye kufanele ukuba zikhanyise kwaye kube lula ukufakelwa kunye nokugcinwa. Umgangatho wekheyi yokuhluza inegalelo ngokuthe ngqo kwimeko yokuhluza kunye nakwinkonzo yobomi beebhegi zokucoca. Sisebenzisa izixhobo zemveliso eziphambili kunye novavanyo lokuthetha ngokwemigaqo eyahlukeneyo yendlu yokuhluza indlu, ukubonelela ngeseti epheleleyo kunye nekheyiji ehambelana nabathengi bethu.
IParameter 2.Product (Ukucaciswa)
Ukucaciswa kweFilitha yeBhegi yokuCoca nge-venturi yomqokeleli wothuli
Iindidi Isitayile esijikeleziweyo / Isitayile esigcweleyo / isitayile semvulophu / Uhlobo olukhethekileyo
Inani leeNgcingo 8/10/12/16/20/24 iingcingo ezithe nkqo
Indawo yokuKhangela Umgangatho wokushiya iiringi yi-intshi ezi-6 okanye ii-intshi ezi-8. (15.24cm okanye 20.32cm)
Cage Ububanzi Cage diameters range from 4 intshi to 8 intshi (100mm to 200mm)
Ukutyeba kwentambo Uluhlu lobunzima beocingo zi-2mm ukuya kwi-5mm
Izinto eziphathekayo Intsimbi yeCarbon, intsimbi ebunjiweyo, intsimbi engenanto
Ukugqitywa Epoxy, PVC IVinyl ukutyabeka
Ukupakisha Iikhetshi zipakishwe kwiibhokisi ezenzelwe isiko
Ukusetyenziswa Uthuli oluvela kumzi-mveliso wam, ukhuni, isamente, imichiza, amayeza,
ukusweleka, Ipeyinti, iplastiki, ukutya kunye nolunye ushishino, olufana namalahle agxothiweyo
izitishi zamandla, isikhululo saMandla ngentsimbi, ishishini lesamente, icandelo lephepha kunye namanye amaCandelo oShishino.
Izinto eziluncedo 1, Akukho umhlwa, akukho monakalo
2, ama-3-5 amaxesha amade obomi kunenye ikheyiji yentsimbi
3, ulondolozo lwezoqoqosho (phantse akukho Sondlo sifunekayo)
4, Iziphumo ezibalaseleyo ekususeni uthuli kwisihluzi ngokutsala
5. Kulula ukuyifaka (ayifuneki iVenturi)
Uhlobo olujikelezayo Ububanzi (mm) Bag Ububanzi (mm) Ubude (mm)
120 135 Ubude (mm)
190 200 Ubude (mm)
Uhlobo lweFlat Umjikelezo Umjikelezo wengxowa 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, 4000,
800 800 Ubude (mm)
Uhlobo lweMvulophu Ububanzi Ubude Ubukhulu Ubude Bag Ububanzi Ukutyeba
3.Product Uphawu Kwaye izicelo
Ukwakhiwa kweekheji kubandakanya ii-10, 12 okanye 20 iingcingo ezithe nkqo.
Isithuba esithe tyaba sekheyiji sinokuba yi-4 ″, 6 ″ okanye 8 ″.
Ububanzi beCage buqala ku-4 ukuya ku-6 1/8 ''
Uluhlu lobungakanani bocingo zezi; 9 gauge, 10 gauge kunye 11 gauge
Ubude beVenturis bufika nge-3 ukuya kwi-6 ″.
Iikhetshi Custom nazo ziyafumaneka
Egqithileyo umnatha insimbi
Okulandelayo: Umtya wokuthunga we-PTFE
Plate ndizayo lokucoca ulwelo
Inkcazo yeplate yePlate yokuCoca icwecwe lelona candelo liphambili lokucoca ulwelo. Izinto ezahlukeneyo, iimodeli kunye neempawu ziya kuchaphazela ukusebenza komatshini wokuhluza ngokuthe ngqo. Umngxunya wayo wokondla, ukuhanjiswa kwamanqaku okucoca ulwelo (ijelo lokucoca ulwelo) kunye neendlela zokukhupha amanzi zinoyilo olwahlukileyo ngokwezixhobo ezahlukeneyo. Ukufakwa kwesicoci seplate Ubushushu obuphezulu ukumelana noxinzelelo oluphezulu kunye nokuhlamba ikhekhe Anti-corrosionsUkucoca okufutshane ...
Igumbi le-Rubber membrane
Igumbi le-Rubber Chamber 1.Ulwazi oluphambili lweenkcukacha zeParameter Uhlobo lweParbosa Chamber Dimension (mm) 400 * 400 800 * 800 1000 * 1000 1250 * 1250 1500 * 1500 Ubunzima beplate yokucoca (mm) 60 65 65 70 75 Ubungakanani becebo lokucoca ulwelo Ikhekhe (mm) 25 30 30 30 35 Ubungakanani bokungena (mm) DN40 DN65 DN80 DN100 DN125 Amanzi amdaka (hlamba) umngxuma (mm) DN25 DN40 DN50 DN65 DN65 uxinzelelo lokucoca (MPa) -0.8 -0.8 -0.8 ≤0 ...
Iifayile zeFayile zokucoca
Iifilitha zePhepha lokucoca ulwelo Ibanga lokuxuba iipleyiti zeFayile zenzelwa iimfuno ezichaziweyo zeshishini lokuxuba. Onke amacandelo ecartridge yokuhluza akumgangatho ophezulu wokuhlangabezana neemfuno zamayeza. Indawo yemveliso engqongqo kunye novavanyo ziqinisekisa ukhuseleko lokuhluza.Umgangatho ophezulu kunye nokhuseleko kunceda abavelisi bamayeza ukuba bavelise umgangatho ophezulu kunye neziyobisi ezikhuselekileyo. ▶ Umgangatho ophezulu wep membrane membrane ukucoca okuphezulu ...
1. Imveliso Intshayelelo yokuThunga i-PTFE yenziwe nge-PTFE Filament Fibre. I-Polytetrafluoroethylene fiber, ebizwa ngokuba yi-fluon e-China, yifayibha eyenziweyo eyenziwe nge-PTFE resin yinkqubo ekhethekileyo. Ngophawu lokuzinza kwemichiza elungileyo ye-PTFE, isetyenziswa kakhulu kwizinto zokucoca ulwelo phantsi kobushushu obuphezulu, i-asidi eyomeleleyo kunye nemeko esisiseko. PTFE ifayibha zingahlelwa White Dibanisa Ifayibha kunye Brown Dibanisa Fiber. Ifayibha emdaka iveliswa kwi-emulsion eyenziweyo yonyangwa ...
IPVDF Iifilitha zeCrafter
Isihluzi sePVDF seCartridges seMicron sokucoca iCartridges yeHydrophobic PVDF yeembumbulu zecoldriji zenzelwe ukucoca igesi kunye nokucoca umoya.Zonke iindawo zecartridge yokuhluza zikumgangatho ophezulu wokuhlangabezana neemfuno zekhemesti. Ulwakhiwo olukhethekileyo lwe-membrane pore lubamba ibhaktiriya esebenzayo. Imeko engqongqo yemveliso kunye novavanyo ziqinisekisa ukhuseleko lokuhluza. Inwebu ephezulu yomthamo inika amandla okuphatha ubumdaka, imveliso egqwesileyo kunye ...